> Resource > Windows > Sida loo sii qulquli Music ka PC in iPad
Waxaan jeclaan lahaa in aan u leeyihiin in ay Schein files aan music MP3 dhan galay Lugood sida Lugood horeba waa daadsanaanta. Ma jiraan hab lagu sii qulquli music aan folder caadiga ah ay ka buuxaan MP3 ayaa si aan iPad markaas?
Music Stream in iPad ka PC oo keliya si aad u ogaato in songs jir on your iPad tageen? Haddii aad tahay qof diidan in uu la kulmo xaaladdaan, waxaad u tagi kartaa si an iPad qalab music kala iibsiga caawimaad. Halkan waa mid wanaagsan, magacaabay Wondershare TunesGo (isticmaalo kombiyuutarada Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Tani waxay awood leh iPad qalab music kala iibsiga awood aad u sii qulquli files music soo doortay ama playlists aad kombuutarka in iPad si deg deg ah. Haddii files music waxay leeyihiin qaabab karin, sida AAC, Amr iyo MKA, qalab loogu badalo doonaa oo sii qulquli files music si ay kuwa qaab MP3.
Download this iPad qalab music kala iibsiga si ay isugu dayaan music geeyo ka PC in iPad.
Fiiro gaar ah: Pleae hubi iPads ku taageeray, OS, shuruudaha nidaamka iyo in ka badan .
Tilmaan buuxda oo ku saabsan sida loo sii qulquli music ka PC in iPad
In qayb hoose, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo sii qulquli music ka PC aad iPad la PC Windows ah. Users Mac isku dayi kartaa tallaabooyinka la mid ah la version Mac ah. Hadda, 'bilaabaan!
Ku rakib oo ay maamulaan this iPad music kala iibsiga qalab on your computer. Markaas, waxaad heli kartaa eegno suuqa kala xiriir.
Tallaabada 1. Isku iPod in ay PC
Si aad ula bilowdo, xiriiriyaan iPod in PC adigoo isticmaalaya cable USB ah. Tani iPad qalab kala iibsiga song si toos ah loo ogaado doonaa iPod ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Stream music kombiyuutar si ay iPad
Raadi "Media" khaanadda tagay. Waxaa Click. Markaas, guji "Music" on line ugu sareeya inay soo qaadaan suuqa kala music ah. Dhammaan files music hadda aad iPad ayaa la soo bandhigay. Guji "Add" si aad u hesho suuqa kala file browser.
Browse aad PC ilaa aad ka heshid files music in aad jeceshahay in aad sii qulquli ah. Dooro files music, oo waxay u sii qulquli. Ama, adigoo gujinaya saddexagalka rogay "Add" ku hoos, in aad sidoo kale dooran kartaa dari files music ama folder music aad iPad. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, hubi in aad iPad xiran yahay.
Haddii aad ku abuureen playlists cadaalad-dhawaajiyeen oo qaar ka mid ah, aad tahay qof ay awoodaan in ay aad u sii qulquli iyaga si aad iPad. Tiirka bidix, guji "playlist". Riix saddexagalka rogay "Add"> "ka Computer dar playlist" hoos. Markaas, qulquli playlists si aad iPad.
Taasi waa hage buuxda oo ku saabsan sida loo sii qulquli music ka PC in iPad. Marka aad fiiriso iPad, waxaad labada arki doonaa ka mid ah heesaha cusub iyo kuwii hore ay jiraan. Waxaa la yaab leh, soo maaha? Hadda, download TunesGo oo isku day inaad naftaada!